Ao amin'ny ACE Archi, mirehareha amin'ny fahaizanay mamorona endrika sarotra indrindra izahay na dia tsy manimba ny maha haingana na ny kalitao aza. Mino izahay fa mendrika ny tsara indrindra omen'ny indostria ianao, ary izany no omenay anao.
Ny serivisy sy talenta maro isan-karazany dia mamela anao hanana fahafaha-manao tsy manam-petra, koa aza misalasala mamorona toa ny tianao amin'ny fangatahanao. Miaraka amin'ny serivisy sy serivisy mampifaninana anay mahatalanjona, azo antoka fa ho lasa iray amin'ireo mpanjifanay afa-po marobe.
Mena bebe kokoa
Nosoratan'i The Lake Residence, Etazonia